Wamkelekile kwiChateau Larose Lake View Suite
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBarb
Ubunewunewu obunokubufumana kwindawo entle! ICallander Bay yidolophu yabakhenkethi ezele zizinto ezonwabisayo ekufuneka zenziwe kwaye konke kumgama wokuhamba. Sinombono wokufela ukutshona kwelanga okudumileyo kweLake Nipissing. I-suite nayo iya kukuchukumisa. Intsha kwaye yangoku. Iza nendawo yomlilo yegesi epholileyo kwaye iqhayisa ngefenitshala ephezulu, i-WIFI ekhawulezayo., Indawo yokusebenza, iiTV ezimbini ezinkulu, iCable & Netflix. Ibhonasi, ngaphandle sinedama lokuqubha, ibhafu eshushu, i-BBQ, indawo yokupaka yabucala kunye nepaki kumda wamanzi phambi kwethu.
Ubunewunewu budibana no-Airbnb!
Le asiyo-Airbnb yakho yesiqhelo. Asizange siphose intlaninge yefenitshala endala esele isetyenzisiwe kwiflethi kwaye siyithumele. Siyaqonda ukuba ufuna indawo ecocekileyo, entsha, entsha, yanamhlanje, etofotofo kunye nenesitayile sokuphumlisa intloko yakho. Sithathe ixesha lokukhetha ngocoselelo kwaye sijonge ifanitshala nganye egumbini, siqinisekisa ukuba ikhululekile, inesitayile kwaye yongeza kwi-ambiance. Ababuki zindwendwe bakho bebefuna ukwenza indawo yokuphumla ukuze wena kunye nabo ubathandayo nihlale, niphumle, kwaye ngaphezu kwako konke, nizonwabele! Njengoko kukho into emnandi kumntu wonke apha. Ukuba ulapha ukwenza ishishini, sisiseko sekhaya esigqibeleleyo esinokwenza ukuba kude nekhaya ukonwabele ngakumbi.
Ikhitshi lokutyela ligcwele izixhobo ezincinci kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale ngexesha lokuhlala kwakho. Side sibe nephakheji yobusuku bothando xa siceliwe. Emva kwesidlo sangokuhlwa, ungagoba phambi kwendawo yomlilo yegesi entle kwaye wonwabele i-55 "Smart TV eneNetflix kunye neCable. Kukho igumbi lokuhlambela le-4pc eligcwele iitawuli zokuhlambela ezishibhileyo, ishampu kunye nezinto zangasese. Igumbi lokulala elikhulu likakumkanikazi linefenitshala. ukusuka kumgca kaKelly Clarkson, umatrasi weEndy omtsha, iduvet ephantsi kunye namaphepha okubala intambo angama 660. Ukuba uthanda ukubukela umabonakude ebhedini?Sikugqumile.Kukho i-intshi ye-intshi ezingama-50. Uya kufumana nendawo ekhethekileyo yokuphumla kwigumbi lokulala, elinedesika eyakhelwe-ngaphakathi yababini ejonge amanzi.Indawo egqibeleleyo yokuba nekofu yakho yasekuseni, jonga ii-imeyile zakho kwaye wenze i-surfing.Ufuna indawo yokulala eyongezelelekileyo?Isofa yegumbi lokuhlala ijika ibe yibhedi elingana nokumkanikazi ngokugqibeleleyo. ibekwe phambi kweziko elikrazukileyo.
IChateau Larose ikuMbindi wePaki yeZulu!
Yonke into oyifunayo kwiholide enkulu ingaphakathi komgama wokuhamba.
Kukho iindawo zokutyela ezimangalisayo/iibhari kunye neenketho zokuphuma ukuze uyonwabele ukutya kwakho.
IGrocery Store, iLCBO, iBhanki, ivenkile yeziyobisi kunye nePosi zonke zikufutshane ngokufanelekileyo.
Abantwana bakho baya kuyithanda iSplash Pad kunye nenqanawa yePirate eCentennial Park, ungaphoswa sisixhobo somthambo sangaphandle esisecaleni kwendawo yokudlala yabantwana. Ungaphumla elunxwemeni lwesanti okanye ukonwabele ukuqubha. Ngaba ujonge ukuphuma emanzini? Ungarenta eyakhe neyakhe iSeadoos okanye isikhephe esilingana nosapho eHarpers Marina. IChibi laseNipissing lihle kakhulu. (qiniseka ukuba ubhukisha isikhephe sakho sokurenta kwangoko) Ungakwazi nokuza nesikhephe sakho! Sinendawo yokuyimisa, kwaye ukuqaliswa simahla kuku-2-imizuzu kude.
Sail kakhulu? NgoLwesibini ebusuku yi-Sailboat Regatta ebusuku, kwaye unesihlalo esingaphambili kwi-Suite yakho.
Ibhonasi, kukho ukuvulwa kweCascade Casino entsha kungekudala apha.
Okwangoku, ukuba uyathanda igalufa, unokuthatha umdlalo kwi-Osprey Links Golf Course, umgama nje wemizuzu emihlanu ukusuka eChateau Larose. Thatha uhambo lwebhayisekile kwi-Kate Pace Way - umzila omhle ojikelezayo we-12 km. ixesha elide elibaleka kumhlaba ochumileyo oluhlaza ecaleni kweCallander kunye neNorth Bay. I-Kate Pace Way iphelela eNorth Bay Waterfront, apho unokufumana imisebenzi eyahlukeneyo, kuquka i-volleyball yaselwandle, i-carousel, imarike yamafama asekuhlaleni (kuphela ngoLwesithathu nangoMgqibelo), kwaye, ngokuqinisekileyo, unokufumana iimbono eziphefumulayo zeLake Nipissing.
Ungaphoswa yiMyuziyam yeLifa leMveli yaseCallander Bay kunye ne-Alex Dufresne Gallery ejikeleze ikona ukusuka kuthi, apho unokufunda malunga neDion Quintuplets.
Ekugqibeleni, ngaphesheya kwesitrato ukusuka eChateau Larose yiMemory Tree Park. Ichongwe njengendawo ezolileyo, ezolileyo kwaye, njengoko igama libonisa, indawo yokwenza iinkumbulo. Ngomqolo omhle weCallander Bay, akunzima ukuqonda ukuba kutheni le ndawo ithandwa kakhulu kwimisitho yomtshato kunye nemifanekiso. Unale nto engqondweni, ababuki zindwendwe beChateau Larose bayakuvuyela ukunikezela ngephakheji yehoneymoon.
Kukho izizathu zokuza kuwo onke amaxesha onyaka. Sindwendwele ekwindla, kwaye uthathe imibala eqaqambileyo yokuwa ngelixa uhamba ecaleni kweCranberry Trail - indlela egcinwe kakuhle ekhokelela abantu kwiqonga eliphakamileyo elijonge kumgxobhozo wecranberry. Yiza ngeNtwasahlobo kwaye wonwabele iPowassan Maple Syrup Festival. Thatha uhambo phezulu kwiiNgxangxasi zaseDuchesnay. Yiba namava ngokuloba iSucker ngezandla zakho. Ubusika bumnandi kakhulu apha ngokuloba umkhenkce, ukukhwela ikhephu, ukukhwela ikhephu, ukunqumla ilizwe kunye nokutyibilika ezantsi kwentaba zonke ezikufutshane; Ungandwendwela i-Laurentian Ski Hill eNorth Bay, indawo yokutyibiliza e-Mattawa. Ukuba uyathanda ukutyibiliza, yiya kwiZiko loLuntu laseCallander, ngaphantsi kwemizuzu emi-5 kude.
Ukufumana imisebenzi yasekuhlaleni kube lula! Xa usindwendwela, sifuna ukuqinisekisa ukuba ukonwabela ubutofotofo be-Chateau Larose, iLake View Suite kwaye ube namava amnandi okufumana le ndawo. Ukufikelela oko, nceda ujonge amakhonkco ekhalenda yeziganeko zeCallander, East Ferris, Powassan kunye neNorth Bay.
Siya kunyanzelisa ngokungqongqo le migaqo-nkqubo ilandelayo.
Akukho zilwanyana zasekhaya kwaye akukho kutshaya / ukufutha / ukuvutha / ukukhanyiswa kwekhandlela kulo naluphi na uhlobo.
Akukho ndwendwe ezongezelelweyo zivumelekileyo kwi-Suite yakho ukuba ayilungiswanga kwangaphambili nathi.
Abantwana bakwa-Airbnb bamkelekile kakhulu kodwa kufuneka bakhatshwe nguwe ngalo lonke ixesha xa ukwindawo yokuPhumeza kunye neBhafu
Akukho ngxolo ivumelekileyo emva kwentsimbi ye-11:00 pm.d kufutshane ne-pool kunye ne-Hot tub.
* 3 iilwandle
* Izikhephe zokuRenta
* Kiddies Park
* Ipaki yeBhola
* 4 Iindawo zokutyela/ Iibha
* 2 Thatha ngaphandle zokutyela
* Ukuqaliswa kwesikhephe
* Ivenikel yokutya
* Ejongene nezokuxhumana
* IMat yokuhlamba impahla
* Indawo yoMtshato/ Ipaki phambi kwendlu yoMthendeleko.
*IZiko loLuntu leQela lizibhloko ezisi-7 kude
UBarb noHal bayakonwabela ukuba ngabamkeli kwaye bangathanda ukudibana nawe. Sikwayaqonda ukuba sonke siyabuxabisa ubumfihlo bethu. Iyunithi yakho inomnyango wayo owahluke ngokupheleleyo onekhowudi engundoqo. Nangona kunjalo, xa kunokwenzeka, singathanda ukudibana nawe ekufikeni.
I-Suite yakho ikwinqanaba lokuhamba lekhaya lethu. Kuya kubakho indawo encinci yepatio yabucala ene-BBQ phambi kwe-suite ehlotyeni. Iindawo zePool kunye ne-Hot tub kwabelwana ngazo kunye neeNdwendwe zethu kunye nathi.
UBarb noHal bayakonwabela ukuba ngabamkeli kwaye bangathanda ukudibana nawe. Sikwayaqonda ukuba sonke siyabuxabisa ubumfihlo bethu. Iyunithi yakho inomnyango wayo owahluke ngokuphe…